Qwalasela i-XBMC kwi-iPad yakho (I): qhagamshela kwidiski yenethiwekhi | IPhone iindaba
Qwalasela i-XBMC kwi-iPad yakho (I): qhagamshela kwidiski yenethiwekhi
Iindaba ze-IPad | | Ihlaziywe 05/02/2019 12:10 | Cydia, Izifundo kunye neencwadana
Isidlali semultimedia seXBMC sesinye sezona zilungileyo kwi-iPhone yethu, i-iPad kunye neAppleTV, ikwanazo neenguqulelo zeWindows kunye neMac.Iye yahlaziywa nje kwinguqulelo entsha ehambelana nescreen se-iPhone 5 kwaye iyaqhubeka nayo yonke imisebenzi yayo emihle, kubandakanya ukwazi ukudlala nayiphi na ifomathi yevidiyo kwaye udlale nawuphi na umxholo owabelwana ngawo kwinethiwekhi yakhoNokuba kwi-hard drive okanye kwikhompyuter yakho. Siza kuchaza iinkcukacha ezimbini ngokunokwenzeka. Ukucwangciswa kwayo kulula ngokulandela amanyathelo esiwachaze apha ngezantsi.
2 Yongeza umxholo wemultimedia kwidiski yenethiwekhi
Umdlali weXBMC ukhululekile, kwaye uyafumaneka kuphela kwiCydia. Ukuyifaka kuya kufuneka wongeze repo «http://mirrors.xbmc.org/apt/ios/« (ngaphandle kweempawu zokucaphula). Nje ukuba wongeze, fumana usetyenziso "i-XBM-iOS" kwaye uyifake kwisixhobo sakho. I-icon entsha iya kuvela kwi-springboard yakho ekufuneka ucofe kuyo ukwazisa usetyenziso.
Yongeza umxholo wemultimedia kwidiski yenethiwekhi
Ndinelayibrari yam yemithombo yeendaba kwi-Capsule yam yeXesha, endivumela ukuba ndiyidlale ngokulula kwi-iPad yam, ukuba nje ndinekhompyuter yam kwaye iTunes isebenza. Ukongeza, wonke umxholo ukwifomathi ehambelana neTunes. Enkosi kwi-XBMC oku akuyomfuneko. Ndingaba nayo nayiphi na ifomathi yevidiyo kwiCapsule yam yeXesha (kunye nayiphi na enye idiski kwinethiwekhi) kwaye ndiyifumane ngokuthe ngqo. Into yokuqala esiyifunayo yi-IP yenethiwekhi yedrive drive yam, endiyibonayo kwimeko yam yesikhululo senqwelomoya.
Ngoku siqhuba i-XBMC, kwaye ucofe ku «Iividiyo» kwiscreen esikhulu. Emva koko sikhetha "Iifayile" kwaye emva koko "Yongeza iividiyo". Kwifestile ebonakalayo, cofa ku "Khangela", kwaye ukhethe "Yongeza Indawo yeNethiwekhi".
Ngoku kufuneka sigcwalise amacandelo avela njengoko kubonisiwe kumfanekiso ongentla kwale migca. Kwi "Igama lomncedisi" kuya kufuneka ufake i-IP yediski yakho kwi-network, nakwi "Igama lomsebenzisi" kunye "nePhasiwedi" igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze ufikelele kuyo. Nje ukuba ugqibile, cofa ku «Kulungile».
Uya kubuyela kwi window yangaphambili, kodwa uzakubona ukuba uxhulumaniso olutsha luyavela, "smb: // 192 ..." (kunye ne-IP yakho), khetha kwaye uya kuba nakho ukuhambisa indlela yesakhiwo solawulo sehard. ukuqhuba. Xa ufika kwisikhombisi apho wonke umxholo wakho ukhona, cofa ku "Kulungile" ukusongeza.
Le festile izakuvela, ukuba ufuna ukuguqula igama leseva yenze emazantsi, kwaye ucofe u-Kulungile xa yonke into ilungile.
Kule festile kuya kukucela ukuba ubonise uhlobo lomxholo, kwimeko yam ziimovie (iiMuvi), kwaye kuba imovie nganye ikwisikhombisi esahlukileyo, ndikhetha olo khetho (iiMovie zikwifolda ezahlukileyo…). Ndicofa u-OK kwaye ndinokulinda kuphela lonke ulwazi olukwimiboniso bhanyabhanya ukuba lukhutshelwe. Kuxhomekeke kubungakanani bolwazi olugcinileyo, inkqubo inokuthatha imizuzu eliqela. Nje ukuba ugqibile, Uya kuba nemiboniso bhanyabhanya ehlelwe ngokufanelekileyo kunye nezikhuselo zabo nayo yonke into.
Ngoku ungonwabela ilayibrari yakho yonke kwi-iPad yakho, nokuba yeyiphi na ifomathi kwaye ngaphandle kokufuna ikhompyuter yokuvumelanisa okanye ukwabelana ngethala leencwadi.
Ulwazi oluthe kratya-IZiko leMithombo yeendaba leXBMC sele ixhasa isikrini se-iPhone 5
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » Qwalasela i-XBMC kwi-iPad yakho (I): qhagamshela kwidiski yenethiwekhi
Awudingi i-xbmc ukuze udlale umxholo okwi-disc ngaphezulu kwenethiwekhi, iFayileBrowser yanele, kwaye awudingi iTunes kwaphela.
Sele sisebenzisile eso sicelo kwibhlog
Kodwa kukho umahluko obalulekileyo:
-IfayileBrowser ihlawulwe (€ 4)
- Ayilungelelanisi ithala leencwadi elinolwazi, igubungela ...
-Ayihambelani nazo zonke iifomathi, umzekelo ayidlali iMKV.
Olukhetho luhle kakhulu kodwa i-XBMC iphezulu ngokoluvo lwam.
Ngo-Matshi 21, 03, ngo-2013: 11 emva kwemini, u "Disqus" wabhala:
Wonke umntu unezinto azithandayo; Isidingo sekhompyuter esivuliwe, ndiyibona njengengxaki engenakuphikiswa. Ngaphandle koko kuthatha iJB.
Hi ndlela leyi, kuvakala ngathi ndikubonile kwifomom, akunjalo?
Ngale nto awuyidingi ikhompyuter.
IforumMac? Hayi ... 😉
Ngo-Matshi 21, 03, ngo-2013: 23 emva kwemini, u "Disqus" wabhala:
Ngolu khetho kunokwenzeka ukuba udlale i-apula tv 3 okanye ibonakale kuphela kwi-ipad? Ndicinga ukuba ukuphindaphinda kuya kubakho, kodwa akufani. Ukuba awukwazi, kunokuba kulunge ukugcina ikhompyuter yakho kwaye ubukele kumabonwakude. Ukubulisa
enkosi titshala, l touch indisebenzele. Ihagi!!
umkhosi ngoku sitsho
Ngaba ikhona inkqubo eyenzayo ngaphandle kokophula umthetho?
Phendula umkhosi ngoku
Isikhangeli seFayile siyafana, unayo kwiVenkile ye App. Apha siyayichaza: https://www.actualidadiphone.com/reproduce-videos-compartidos-en-tu-red-con-filebrowser/
Funda isiNgesi ngomatshini weentsingiselo zeentsingiselo zeCambridge Phrasal
Qwalasela i-XBMC kwi-iPhone yakho (I): qhagamshela kwidiski yenethiwekhi